Inaliti yeIvermectin, Amoxicillin yenaliti-Lihua
IAlbendazole Bolus 2500mg
I-Albendazole yi-anthelmintic eyenziweyo ekwiqela le-benzimidazole-derivatives enomsebenzi ngokuchasene noluhlu olubanzi lweentshulube nakwinqanaba eliphezulu leedosi nakwizigaba zabantu abadala zesibindi. Isenzo samachiza iAlbendazole idityaniswe neprotein ye-eelworm's microtubule kwaye idlala indima. Emva kwe-albenzene edityaniswe ne-β- tubulin, inokuthintela ukunciphisa phakathi kwe-albenzene kunye ne-α i-tubulin yokudibana kwii-microtubules. IiMicrotubules sisiseko esisiseko se-m ...
Izibonakaliso Ukuphucula ukusebenza kokukhula kunye nokuzala. Kwimeko yokusilela kweevithamini, iiminerali kunye nezinto zokulandela umkhondo. Xa utshintsha imikhwa yokondla Nceda isilwanyana ekuphulukaneni naso ngexesha lokuchacha. Ukongeza ngexesha lonyango. Ukuxhathisa okukhulu kosuleleko Ukongeza ngexesha lonyango okanye uthintelo lwezifo. Yandisa ukuxhathisa phantsi koxinzelelo. Ngenxa yentsimbi ephezulu, iivithamini kunye nokulandelela umxholo, iyanceda isilwanyana ukuba silwe ne-anemia kwaye sikhawulezise ...
I-Tylosin Tartrate Bolus 600mg
Isisombululo solawulo ngomlomo. Iinkomo, iigusha, iibhokhwe kunye neehagu: 1 icwecwe / 70kg ubunzima bomzimba. Izilumkiso ezikhethekileyo ezingasetyenziswanga ngexesha lokubeka iinkukhu. Ingabangela ukungalingani kwemifuno yamathumbu, ixesha elide lonyango linokubangela ukunciphisa i-vitamin B kunye ne-vitamin K synthesis kunye nokuxutywa, kufuneka yongeze iivithamini ezifanelekileyo. Ukusabela okungalunganga Ukusetyenziswa kwexesha elide kunokonakalisa izintso kunye nenkqubo ye-nervous, kuchaphazele ukutyeba, kwaye kunokwenzeka isulfonamides ityhefu. Ixesha lokurhoxa C ...
ILevamisole Bolus 20mg
I-AdvaCare ngumvelisi we-GMP weLevamisole Hydrochloride Boluses. ILevamisole HCL Bolus yeyeklasi yemichiza eyaziwa ngokuba yi-imidazothiazoles kwaye ihlala iyinto yokukhetha ixabiso elisezantsi kwimfuyo. Ihlala isetyenziswa njengetyuwa ye-chloralhydrate, kwaye ngamanye amaxesha njengephosphate. I-Levamisol HCL ivuselela ukusetyenziswa kwizinja kunye neekati isezantsi kunemfuyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-AdvaCare's levamisole HCL bolus yenzelwe iinjongo zonyango kuphela, kuya kufuneka usebenzise uhlobo ...
Inaliti ye-Ivermectin 1%
Ivermectin yeqela le-avermectin kwaye isebenza ngokuchasene neentshulube kunye neentsholongwane. Iimpawu zibonisa unyango lweentshulube zesisu, iintwala, usuleleko lwemiphunga, i-oestriasis kunye nekhwekhwe kumathole, iinkomo, iibhokhwe, iigusha neehagu. Izikhombisi zoLawulo lwezilwanyana ezincancisayo. Iziphumo ebezingalindelekanga Xa ivermectin inxibelelana nomhlaba, ibophelela ngokulula kwaye ngokuqinileyo ibophelela emhlabeni kwaye ingasebenzi ngokuhamba kwexesha. Ivermectin yasimahla inokuchaphazela kakubi iintlanzi kunye namanzi athile ...
Inaliti ye-Oxytetracycline 20%
I-Oxytetracycline yeqela le-tetracyclines kwaye yenza i-bacteriostatic ngokuchasene ne-bacteria ene-Gram-positive ne-Gram-negative efana neBordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus kunye neStreptococcus spp. Isenzo se-oxytetracycline sisekwe kuthintelo lweprotein ye-bacterial synthesis. I-Oxytetracycline ikakhulu ikhutshwa kumchamo, kwinxalenye encinci yenyongo nakwizilwanyana ezincancisayo kubisi. Inaliti enye yenza ...
Inaliti yeTylosin 20%
I-Tylosin yi-macrolide antibiotic enesenzo se-bacteriostatic ngokuchasene ne-Gram-positive kunye ne-Gram-negative bacteria efana neCampylobacter, iPasteurella, iStaphylococcus, iStreptococcus kunye neTreponema spp. kunye neMycoplasma. Iimpawu zesisu kunye nosulelo lokuphefumla olubangelwa yi-tylosin ethe-ethe kwizinto eziphilayo, ezinjengeCampylobacter, iMycoplasma, iPasteurella, iStaphylococcus, iStreptococcus kunye neTreponema spp. kumathole, iinkomo, iibhokhwe, iigusha neehagu. Izalathiso ezichaseneyo Hypersensitivity to ...
Inaliti ye-Levamisole 10%
I-Levamisole yi-anthelmintic yokwenziwa kunye nomsebenzi ngokuchasene nomthamo obanzi weentshulube zesisu kunye nemiphunga yemiphunga. I-Levamisole ibangela ukonyuka kwethoni yezihlunu ze-axial kulandele ukukhubazeka kweentshulube. Iimpawu Prophylaxis kunye nonyango losulelo lwesisu kunye nemiphunga njenge: Amathole, iinkomo, iibhokhwe, iigusha: iBunostomum, iChabertia, iCooperia, iDictyocaulus, iHaemonchus, iNematodirus, iOstertagia, iProtostrongylus kunye neTrichostrongylus spp. Ihagu: Ascaris suum, Hyostrongyl ...
Okwangoku, inkampani inabasebenzi abangama-216 abanezidanga zekholeji okanye ngaphezulu, abenza i-80% yenani lilonke lenkampani.
Ukusinda kwenkulungwane, ukuqiniswa kwemfuyo kuqinile, ezolimo ziyachuma
Iindidi ezine zamachiza amatsha esizwe, iintlobo ezintandathu zeemveliso zamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye neendlela ezintathu zokulungiselela amalungelo awodwa omenzi wechiza asetyenzisiweyo.
Iimveliso zayo zithunyelwa kumazwe ayi-15 (iTopiya, iSudan, iPakistan, iMyanmar, iCameroon, iChad, njl.
I-Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.yishishini eliphambili kwezobuchwephesha eligxile kuphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye neenkonzo zobuchwephesha zamayeza ezilwanyana, kunye nenkunzi ebhalisiweyo yezigidi ezingama-80 yuan.
Ngomsebenzi "weMinyaka eliKhulu yoBomi, ukuXhaswa kweZilwanyana okuQinisekileyo kunye nokuPhumelela kwezoLimo", inkampani izinikele ekubeni ngumnikezeli wemveliso yonyango lwezilwanyana kwinqanaba lokuqala olusekwe kubuchwephesha nakwiitalente.
Idilesi: IShijiazhuang Xinle kwisikhululo seenqwelomoya